नयाँ स्मार्टफोनको साथमा चार्जर नआउनुको वास्तविकता - NA MediaNA Mediaनयाँ स्मार्टफोनको साथमा चार्जर नआउनुको वास्तविकता - NA Media
एप्पल, साओमी र सामसङ जस्ता धेरै कम्पनीहरुले अब तपाईंलाई नयाँ स्मार्टफोन खरिद गर्दा साथमा चार्जर नदिने घोषणा गरिसकेका वा गर्दै छन् । अनि यी सबै कम्पनीहरुले त्यसको कारणमा दिने एउटै जवाफ हो वातावरण संरक्षण ।तर यसले एउटा कुरा सोच्न बाध्य बनाउँछ कि चार्जर नदिदैँमा वातावरणको रक्षा हुन्छ ?
किनभने बिना चार्जर फोन मात्र सप्लाई गर्दा बक्सको आकार घट्छ । जसले प्लास्टिकजन्य तत्वहरुबाट हुने प्रदुषणलाई घटाइरहेको हुन्छ ।
सामसङको यही तर्कलाई आधार मानेर तपाईंले सामसङको नयाँ ग्यालेक्सी एस ट्वान्टी वान अल्ट्रा र एस ट्वान्टी अल्ट्राको बक्सलाई नै हेर्न सक्नुहुन्छ । जसमा एस ट्वान्टीको तुलनामा एस ट्वान्टी वानको बक्स निकै सानो छ ।एस ट्वान्टी वानको आधा साइजको बक्सलाई हेर्दा यी कम्पनीहरुको सोच निकै राम्रो लाग्छ । तर कम्पनीहरुको यो निर्णयसँगै यसले अप्रत्यक्ष रुपमा अर्को असर पनि जन्माएको छ ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको नयाँ फोनमा चार्जर आएन भने तपाईंले पुरानो चार्जरबाट काम चलाउन खोज्नुहुनेछ । जुन एकदमै सुस्त र कम पावरको हुनेछ ।दोस्रो कुरा भनेको जब तपाईं पुरानो चार्जर प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यतिञ्जेल चार्जर र त्यसको केबल दुवै कमजोर भइसकेका हुन्छन् । जसले नयाँ फोनका लागि थप समय धान्न सक्दैन ।
के यी कम्पनीहरुले उसो भए पुरानो चार्जरमै प्रयोगकर्ताहरु भर पर्न सकुन् र थप अनावश्यक फोहोर मैलाले वातावरण प्रदुषित नहोस् भन्ने चाहेका हुन् त ? तीन वर्ष पुरानो फोनको चार्जर त सायदै कसैले साचेर राखेका होलान् ।
न त तिनले तपाईंको थप एड्भान्स फ्ल्यागशिप मोडलको शक्तिशाली ब्याट्री चार्ज गर्न सक्छन् । यस्तो बेला तपाईंले पक्कै पनि प्याकेट सहित नयाँ चार्जर किन्नु नै हुन्छ ।
जसले अन्तत अघिल्लो पुस्ताको फोनलेभन्दा धेरै फोहोर मैला उत्पन्न गराउनेछ । त्यसमाथि एउटा छुट्टै चार्जरको बक्सभित्र कति प्लास्टिक, पेपर हुन्छन् भन्ने कुरा त तपाईलाई थाहै छ ।तर फोनहरुमा चार्जर नदिने निर्णयसँगै अब तपाईले थाहै नपाई इयरफोन पनि गुमाउँदै हुनुहुन्छ । सामसङले भर्खरै सार्वजनिक गरेको नयाँ स्मार्टफोन एस ट्वान्टी अल्ट्रामा हेडफोन ज्याक नै छैन ।
यूएसबीसी इयरफोन प्रयोग गर्नेहरु पनि एकदमै कम छन् । अहिले वायरलेस इयरफोनको बजार एकदमै बढिरहेको छ ।यो त एउटा सुरुवात मात्र हो । अबको केही वर्षमा अन्य धेरै कम्पनीहरुले निःशुल्क दिदैँ आइरहेको फोनको केस पनि उपलब्ध गराउन छाड्ने देखिन्छ ।
एप्पलले सधैं अनावश्यक लागेका कुराहरुलाई त्यागेर चाहिने कुराहरुलाई मात्र समेटेर आफ्नो छुट्टै नाम स्थापित गरेको कुराबाट हामी अनविज्ञ छैनौं । एप्पलले आफ्नो फोनमा चार्जरको भार कहिल्यै पनि राख्दैन र यसको प्रतिस्पर्धाबाट उ बाहिर भएको कुरा स्पष्ट छ ।चार्जर हटाउने कुरा आफैंमा विवादित भए पनि एप्पलले भने यसलाई सही ठान्दछ । तर एप्पलको पनि आफ्नै समस्या छ । वातावरणमाथिको प्रभावलाई कम गर्न चार्जर हटाएको उसको दाबी छ ।
तर उसका केही क्रियाकलाप भने उसको दाबीभन्दा विपरित छन् । किनभने तपाईंले आइफोन ट्वेल्भमा पाउने केवल पुरानो चार्जर ब्रिकसँग मिल्दैन ।त्यसैले यदि तपाईं ट्वेल्भ सिरिजको नयाँ केबल प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ ब्रिक किन्नै पर्छ ।एप्पल अहिले म्यागसेफ चार्जरको जोड साथ प्रचार गरिरहेको छ ।
नयाँ आईफोनलाई वायरलेस तरिकाले म्यागसेफबाट स्नापअन अट्याचमेन्टको माध्यमबाट चार्ज गर्न सकिने एप्पल बताउँछ । आईफोन थर्टिनपछि यसरी चार्ज गर्नुपर्ने समय आउला जस्तो पनि देखिन्छ । किनभने त्यतिखेरसम्म एप्पलको फोनमा चार्ज गर्न फिजिकल पोर्ट नहुन पनि सक्छ ।
तर म्यागसेफ र वायरलेस चार्जिङ दुवै वातावरणमैत्री अवधारण विपरीत छन् । किनभने तपाईंले म्यागसेफ प्रयोग गर्दा यसलाई छुट्टै प्याकेजिङमा किन्ने मात्र होइन, तपाईंको फोनलाई चाहिने सही र पर्याप्त स्पिडमा पनि यो उपलब्ध हुने छैन ।
कतिपय वायरलेस चार्जरले त डिभाइस चार्जर नगरी पावर मात्र सिपिङ गरेको पनि पाइन्छ । २४ घण्टा केही चार्ज नगरी ऊर्जा मात्र खेर गइरहेको हुन्छ ।म्यागसेफको कुरा गर्दा यो पनि वायरलेस चार्जर जस्तै छ । यसमा चुम्बक छ । तर वायरयुक्त चार्जरको तुलनामा यो पनि राम्रो छैन ।